Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii Sanadlaha ahaa ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Dalka Germany oo Guul kusoo Dhamaaday.
Shirwaynihii Sanadlaha ahaa ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Dalka Germany oo Guul kusoo Dhamaaday.
Posted by ONA Admin	/ January 5, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 4/1/2014 lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka Shirkii sanadlaha ahaa ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ay sanad walba xiligan oo kale qaban jirtay. Shirkan oo aha mid kaduwan shirarkii hore ee Jaaliyada ayaa aha mid mudo dheer laga sooshaqeeyay siwanaagsana loosoo agaasimay
Waxaa kulanka sanadka kaqaybgallay qaybaha kala duwan ee jaaliyadaha Somalida Ogadenia, Jaaliyada Eriteria iyo Jaaliyada Oromiya ee kudhaqan dalka Germany. Dhamaan Jaaliyadahan oo uu saameeyay Gumaysiga daalan ee Itoobiya yaa siwada jir ah iskugu yimid kulankan shalay kadhacay magaalada Farnkfurt ee dalka Jalmalka.
Waxaa kaloo kulankan kasoo qaybgalay madax iyo masuul heer sare ah oo kasocday Jabhadaha kaqaybgalay shirka kuwaasoo uu kamid ahaa Mudane Xasan Macalin Kaaliyaha Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO uqaabilsan Arimaha Itoobiya. Mudane Xasan Macalin wuxuu madasha shirka kajeediyay khudbad aad uqiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo soojiidatay kaqaybgaleyaashii shirka.
Mudane Xasan wuxuu sharaxaad iyo faah faahin qotodheer leh kabixiyay xaalada uu Halganka Ogadenya maanta marayo iyo siduu gumaysiga TPLF gabalkoodu udhacay taasoo ubaahan in dhamaan shucuubta kuhoos jirta gumaysigaas saama laluudka ah meel kaliya looga soowada jeedsan lahaa la,iskagana xorayn lahaa.
Waxaa shirkan lagu soo bandhigay filin aad umurugo badan oo laga soo diyaariyay xasuuqa ba,an ee arxan darri ah ee uu Gumaysiga Wayaanuhu kuhayo shacabka Somalida Ogadenya kasoo uu soobandhigay Mudane Cabdullahi Xuseen oo naftiisa khatar ugaliyay siduu beesha caalamka oogu soo bandhigi lahaa xasuuqa iyo gumaadka baahsan ee Ogadenya kasocda.
Kadib markii dadwaynihii madashada shirka iskugu yimid ay daawadeen filinkii laga soodiyaariyay Ogadenya yaa waxaa mar kaliya isbadalay dareenka kaqaybgaleyaasha madasha joogay. Filinkan oo muujinayay tacadiyada iyo xadgudubka kadhanka ah xuquuqda banii,aadamka ee lagu hayo bulshada rayadka ah ee kudhaqan wadanka Ogadenya ayaa noqday mid argagax iyo murugo badan kureebay daawada yaashii filinka.
Waxaa su,aalo kusaabsan filinkan laga waydiiyay Mudane Cabdullahi Xuseen oo siwaafi ah ooga wada jawaabay dhamaan su,aalihii ay dadwaynuhu waydiiyeen. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay kulankan warbixino isugu jira maqal iyo muuqaal oo laga soodiyaariyay wadanka Oromiya oo iyaguna ahaa kuwo aad umurugo iyo naxdin badan.
Dhanka kale waxaa kulankaas kabacdi laqabtay kulan ugaar ah Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Jarmalka. Waxaa kulankan kaqaybgalay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya Admiral Maxamad Cumar Cismaan isagoo gudoomiyuhu kajeediyay kulankan warbixinadii oogu danbeeyay ee wadanka Ogadenya iyo guulaha ay gaadheen Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya ee kadagaalama ciida hore. Wuxuu gudoomiyuhu aad ooga waramay xaalada uu maanta gumaysigu kujiro taasoo soodhawaynaysa guusha uu shacabka S.Ogadenya oogu jiro aayo katashigiisa. Warbixinta Gudoomiyaha oo ahayd mid aad uxiisa badan ayay dadwaynuhu aad oogu diirsadeen.
Waxaa kale oo isna shirkan kahadlay Mudane Jamaal Diiriye oo ahaan jiray xildhibaan katirsan Baarlamaanka Federalka Itoobiya isagoo iskaga fadhiistay siyaasada. Wuxuu Mudane Jamaal si qotodheer leh ooga hadlay beenta iyo borobagaandaha kajirta Itoobiya ee kuwajahan wadanka Ogadenia taasoo ladoonayo in lagu marin habaabiyo bulshada kudhaqan wadanka dibadiisa . ‘ Wuxuu Gumaysigu doonayaa in horumar aan jirin laga dhaadhiciyo dadwaynaha si,ay ididiilo iyo aragti aan jirin uga qaataan xaalada uu dalka iyo dadkuba kusugan yihiin* waxaa sidaas yidhi Xildhibaan Jamaal.
Shirkan oo aha mid laga gaadhay hadafkii iyo ajendihii loosoo asagaasimay yaa kusoo dhamaaday jawi aad uwanaagsan ooy kasoo bexeen go,aamo iyo talaaboyin wax ku,ool ah oo uhorseedi doona sidii shucuubka dulman ee kuhoos jirta gumaysiga wayaanaha ay iskaga kaashan lahaayeen ladagaalka iyo ineey aayahooda katashadaan iyagoo umadax banaan.
ONA / Germany